▷ Ezona ndawo zokuhambisa iintlanzi zibalaseleyo | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Izixhobo, Ukutya iintlanzi
Ukuba unayo itanki yentlanzi, usenokucinga ngokuthenga isixhobo sokuhambisa iintlanzi kwaye ulibale malunga nokuzondla ngesandla. Ngezi zixhobo kuya kufuneka ukhathazeke ngokuzalisa ngokutya xa zigqityiwe. Zintle kwaye zisebenza kakuhle kwaye zisisindise kwingxaki "ndilibele ukondla iintlanzi." Kule posi siza kuhlalutya ukuba ungayikhetha njani into yokuhambisa ukutya kweentlanzi ngokweemfuno zakho kwaye zeziphi iimodeli ezikhoyo.
Ngaba uyafuna ukwazi okungakumbi malunga nokuhanjiswa kweentlanzi? Qhubeka ufunda.
1 Eyona ndawo yokuhambisa iintlanzi
1.1 Feeder oluzenzekelayo
1.2 Isixhobo sokuhambisa iintlanzi
1.3 Isondli enokuchazwa ngokuzenzekelayo
1.4 Ukuhambisa ukutya okuhlanganisiweyo
1.5 Umatshini wokuhambisa ukutya ngesandla kunye nokuzenzekelayo
2 Izinto ngokubanzi
3 Ungayikhetha njani into yokuhambisa ukutya kweentlanzi
Eyona ndawo yokuhambisa iintlanzi
DanLink iringi ye...
I-Shrimp Balacoo ...
Ukusukela ngoku siza kuhlalutya nganye yeemodeli ezithengiweyo luluntu oluthanda iintlanzi kwaye zeziphi iimpawu zalo eziphambili
Ngumkhombe onayo Uyilo olulungileyo lokumelana nexabiso eliphezulu lokufuma ngaphandle kokufumana monakalo okanye ukonakala. Ikuvumela ukuba udwelise isixa sokutya ofuna ukusinika iintlanzi kunye nomthamo wokutya onokuthi uzazise kuwo. Kuxhomekeke kubume be-aquarium, le feeder ngokuzenzekelayo inokuxhonywa okanye izimele. Ungayibona apha.
Uhlobo lweBIGWING feeder ...
Isixhobo sokuhambisa sincinci kodwa singasetyenziselwa ukondla iintlanzi zethu xa sinembalwa. Zininzi iitanki zentlanzi ezibandakanya kuphela iisampulu ezi-4 okanye ezi-5, ke le nto yokuhambisa incinci iya kuqinisekisa ukuba iintlanzi zethu azizoyiki, kuba Kulula ukuyifihla kunye nezinye izinto ze-aquarium.
Inesiphelo esifanelekileyo sokumelana nokufuma ngoko kugcina ukutya ngaphakathi ngaphakathi kweemeko ezifanelekileyo. Isikhongozeli sinokugcwaliswa kwakhona xa kukho imfuneko ngaphandle kokudibanisa isixhobo esipheleleyo. Ngomsebenzi wokujikeleza ungalungelelanisa inani lokutya ukondla iintlanzi. Jonga amaxabiso aphezulu apha.
Isondli enokuchazwa ngokuzenzekelayo
Kule meko sifumana uhlobo lwe-feeder esuswayo ukuze sikwazi ukuyihambisa ngokulula okanye zicoceke ngaphakathi kwaye zihlala zigcinwe zikwimeko entle. Bubungakanani obulungileyo bokuzisa ukutya okwaneleyo okwexeshana kwaye ulibale ukondla iintlanzi ngesandla. Eyona nto iguqukayo malunga nale modeli kukuba inescreen esibonisa inqanaba lokutya onalo ukuze wazi ukuba uza kugcwalisa nini.
Ivumela unxibelelwano lwayo kwimpompo yomoya kwimeko apho uyifunayo. Ixabiso layo lifikeleleka kakhulu.
Ukuhambisa ukutya okuhlanganisiweyo
Zenzekelayo feeder ...
Esi sondli sizenzekelayo sivumela ukumisela inani lokutya elinikwa intlanzi kunye nobuninzi. Ungayicwangcisa ukondla rhoqo iiyure ezili-12 okanye ezingama-24 Yeyiphi eyona iqhelekileyo. Inendawo yokugcina ukutya kunye nokwenza lula ukuzalisa. Ungasibona sigqibile esihle apha.
Umatshini wokuhambisa ukutya ngesandla kunye nokuzenzekelayo
DORSION Umondli weentlanzi ...
Kule meko sifumana isixhobo esisebenza kabini. Lo mlawuli usivumela ukuba sondle iintlanzi zethu ngokuxhomekeke kwiimfuno. Ukuba sifuna ukondla intlanzi ngesandla okanye kufuneka siyenze okwethutyana, akufuneki siyisuse kwi-aquarium. Ibe indlela yokondla yesandla yokumisa ukuhanjiswa kokutya kwixesha olifunayo. Okwangoku, kugcina ukutya kwakho kukwimeko egqibeleleyo.
Iyaxhathisa ukufuma kwaye inexabiso elihle ngezibonelelo ezibonelelayo.
Ndiyathemba ukuba ngezi modeli unokukhetha eyona ikulungeleyo.
Iintlanzi kufuneka zondle rhoqo kwaye ngaphandle kokungabikho kwezondlo. Akufuneki silibale ukuba bakwindawo engeyondawo yabo yokuhlala kwaye kufuneka sibeke uxinzelelo kubo ubuncinci ukuze ubomi abanabo kwitanki leentlanzi lube lolona lubalaseleyo. Ukwenza oku, a umthengisi wokutya kweentlanzi ingumbono olungileyo wokulibala kwaye abo bangafuni kuxhonywa kukutya kwentlanzi kwaye babe ngamakhoboka.
Ngesixhobo sokuhambisa ukutya ungondla iintlanzi zakho rhoqo kwaye ngokuzenzekelayo. Ziyacwangciswa kwaye unokumangaliswa kukuba kude kangakanani iteknoloji namhlanje. Ukuba ufuna ukuyondla ngesandla ukomeleza ubudlelwane okanye ngenxa yokuba isampuli iyagula, ungayenza. Kuzo zonke izibonelelo, ukuhambisa ukutya kubalulekile.
Ngokubanzi, bonke abanikezeli bokutya banikwa amandla ziibhetri zeAA njengoko le iyindlela yokuqinisekisa ukubonelelwa kokutya. Ukusetyenziswa kwaba feeder kuncinci kuba basebenza kuphela xa bezokondla iintlanzi. Oku kuqinisekisa ukuba ziya kuhlala zondlekile kwaye zingasweleki kwizondlo. Kukho abanye abondli abaphuhlisiweyo abanemisebenzi eyongezelelweyo enje ngealam, iibhetri okanye ezinye izinto ezilungiselelwe ukondla iintlanzi ngomda oqinileyo.
Ungayikhetha njani into yokuhambisa ukutya kweentlanzi
Nangona kunjalo, amawaka eemodeli kunye nokusebenza kuyavela kwaye asazi ukuba yeyiphi eyona ilungileyo kuthi. Into yokuqala ekufuneka ujonge kuyo xa uthenga isixhobo zezi zinto ungayicwangcisa kwaye uyihlaziye kwakhona njengoko ikulungele. Kukuhambisa ukutya ekufuneka kuhambelane nawe hayi kuwe. Kukho iintlobo zeemodeli ezikuvumela ukuba uzondle kanye ngemini okanye ezininzi. Ke khetha eyona ntlanzi yakho iyifunayo, kuxhomekeka kuhlobo abanalo kwi-aquarium.
Enye into ekufuneka uyithathele ingqalelo Zizinto ezenziwe ngazo. Oku kubalulekile xa ujonga ukufuma okukhoyo kwitanki leentlanzi kwaye ukuba izinto azilungiselelwanga kakuhle, ziya konakala ngokuhamba kwexesha. Ezona zilungileyo zihlala zenziwe ngeplastikhi kuba zingcono ukumelana nokufuma okusingqongileyo. Ngokufanelekileyo, khetha i-dispenser ehlala ixesha elide kangangoko kunokwenzeka.
Kwindawo yesithathu, kubalulekile ukuba wazi isitayile sokondla Uya kuba nayo kuba kufuneka "ifihle" ngokwayo phakathi kwezinye izinto zomhlobisi we-aquarium ukuze ungoyikisi iintlanzi. Ukuba iintlanzi zivakalelwa kukuba kukho ingozi yokusondela kwisixhobo, azizukutya okanye zizive zikhuselekile. Ke kuyacetyiswa ukuba ukhethe imodeli kunye nombala ohambelana nomhombiso okhoyo kwi-aquarium yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Ukutya iintlanzi » Isixhobo sokuhambisa iintlanzi
Xa le ngxaki idlulile ndingathanda ukwazi ezona mpawu zintle nazo zikhululekile nceda ndinentlanzi eziyiguppy, amadoda amadala ama-3, umntu omdala obhinqileyo om-1 kunye nomncinci ona-11.